Indlela Yokwenza Inkomo Yobisi ikhulelwe
A Jersey cow with her newborn calf.
Ukulima amakhemikhali kuyinkqubo eqhubekayo yezinkomo ezikhulayo (ukubeletha), ukukhiqiza ubisi nokukhulelwa futhi.Ukuze ugcine izinga eliphakeme lokuphathwa kokukhiqiza, ilanga elilindelekile lokuhlalisa phansi kufanele libe ngaphansi kwezinyanga ezingu-13 kusukela kulolu suku lokukhokha.
Uma isikhathi sokukhalisa (isikhathi esiphakathi kwamadethi aphansi) sikhatsi eside kakhulu, sinciphisa ukhiqizwa ubisi emhlambini kanti futhi kunciphisa ukuqhubeka komhlambi wezinkomo. Ukukhiqiza ubisi oluphakeme kanye namathole amaningi azalwa ngonyaka kungukubili kwezinzuzo zomnotho zokuphathwa kokukhiqiza okuhle.
Ukuzalisa izinkomo zobisi okungaziveleliyo
Ukuze uthole izinkomo ezikhulelwe, insizakalo yemvelo (inkunzi), ingasetshenziswa. Noma kunjalo, izinkomo ezincane ezigcina inkunzi zibiza futhi ngokuvamile zibangelwa izinkinga zokuphatha. Bangathola ulaka, futhi badinga ukugcinwa behlukene futhi badinga ukondliwa. Ngaphezu kwalokho, ngokusebenzisa inkunzi efanayo njalo, ukuthuthuka kwezakhi zofuzo kunqunyelwe.
Ezinsukwini 'ezindala', izinkunzi zabelwana phakathi kwabalimi, kodwa lokhu kungabangela izifo zokuzala ukuba zisakaze futhi zonke izinkomo zibe zingapheli. Ngenxa yalokhu ukuxoshwa kwamakhemikhali (AI) wezinkomo kwakhiwe.
Ukusabalalisa ngokweqile ngokuvamile kuyhibhile ukuthi usebenzisa inkunzi. Kuyindlela elula efaka ukufakwa kwesidlo esiphilayo ngesikhathi nendawo esifanele ngaphakathi kwendlela yokuzala yezinyosi zokubeletha.
Ukuqothulwa kwezinkomo ngokweqile kuyindlela ejwayelekile emalini wezolimo ezentengiselwano. Intuthuko ye-Genetic iphakeme uma usebenzisa i-AI. Lokhu kungenxa yokuthi isithombo esivela emhlabeni jikelele wezinkunzi siyatholakala ngezindleko eziphansi kunokugcina inkunzi.
Kodwa-ke, ku-AI, ukuzala kwezinkomo zobisi kuncike ekutheni abantu bakwazi ukubona uma izinkomo sezishisa. Futhi badinga ukwazi ukuthi bangabeka kanjani isilwane ngesikhathi esifanele nendawo yokukhulelwe ukuze kwenzeke. I-AI ifundiswa ngezinsuku ezincane, ezinsukwini ezimbili, izifundo noma zingafundiswa kudokotela wezilwane. Ezinye izinkampani ezinikeza isilwane sezinkunzi, zinikeza i-AI njengesevisi eyengeziwe, kanti ezinye izilwane zezilwane nazo zingenza i-AI.